Summer ... Sekuyisikhathi ukushiya ... Kule nkathi, bonke abalimi abafuna ngangokunokwenzeka ukuchitha isikhathi emoyeni opholile, okuholela oda yakho indawo iholide. Njalo villa kuqedile ngaphandle eshaweni ehlobo. Kwaba njalo ngempela, ngemva ingadi kuyakhathaza isebenza kuphela ongasindisa at lokushisa 30 Celsius, ohlala ehlobo douche, lapho ungakwazi nje aqabulayo kodwa futhi uhlanze wonke ukungcola nothuli. Futhi ukuqinisekisa ukuthi amanzi enikeziwe ngaphandle kwezinkinga, kufanele ukhethe isitsha esifanele umphefumulo, njengoba sikhuluma namuhla.
Umsebenzi eshaweni ethangini
Isitsha umphefumulo - lena yini ebaluleke kakhulu futhi zibalulekile, mhlawumbe ngaphandle kwalokho kakho izindleko, akekho ngaphandle eshaweni. Yiqiniso, ungenza ngaphandle kwalo, esisuka hose kusukela ice umpompi. Kodwa leli thuluzi nje uthanda kakhulu ngempela. tank amanzi wenza imisebenzi emibili: isitoreji kanye Ukushisa uketshezi ngenxa okusezingeni eliphezulu lokushisa ilanga futhi supply yayo ngokushesha ngenxa amandla adonsela phansi ngokusebenzisa idivayisi ekhethekile (Nokho, lezi iziqukathi ezibekwe njengoba eliphezulu ngangokunokwenzeka). Uzokhetha imininingwane kuzoncika kanjani ngokushesha ashisise amanzi nokuthi kuyoba efudumele. Ukuya esitolo, balimi abaningi bayazibuza ukuthi iminyaka eminingi liyokuma nokuthi ngeke wavele uma uthele amanzi kuyo. Izici iziqukathi encike ngqo kwi impahla zenziwa kuyiphi, kanye nemibandela yokusebenza ngokwabo. Ake sibone ukuthi yini okufanele azibheke uma ngokukhetha isabelo.
nenqubo yokukhetha. izindleko
Lapho ukhetha mazingadangali iziqukathi ngokushesha ezibizayo, kodwa hhayi siphephele ngokweqile ku embodiments ezishibhile. Izindleko zale divayisi incike indlela kanye nekhwalithi yokukhiqiza. Inqubomgomo zamanani, ukulandela isimiso "Kala kasikhombisa, usike esisodwa."
Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha umphefumulo - indlela yokwakha
izinguqulo Plastic unendlela ezifanayo ukukhiqiza, kanye amathangi amanzi okuphuza. Kuze kube manje, abakhiqizi ukukhiqiza izinhlobo ezimbili imikhiqizo: besshvovye (isimiso udini ukujikeleza) kanye umphetho (ie umthamo ingcina). Eyokuqala yavlyapetsya isimiso kunokwethenjelwa futhi iqine kuneyesibili, kusukela akukho ingozi ethangini umkhiqizo nokunamathisela ezinkulu.
Isici elilandelayo - izinga lokushisa lapho isitsha esetshenziswa ngoba umphefumulo. Besshvovye amathangi zingamelana ukusebenza ezingeni lokushisa lokususa amane kuya plus ayisithupha degrees Celsius, nimbize amathangi njengoba ingcina eziqhutshwa ngesikhathi lokushisa kusuka plus emihlanu kuya plus amathathu degrees Celsius. Isiphetho self - izinto ingcina musa kudonse nyaka, ngoba ngezinye izikhathi elangeni, futhi ethangini ungakwazi ukufudumeza kufika ku-50 degrees ukuchayeka imisebe ultraviolet. Kodwa ebusika ngokucacile iphumele ngesigamu, kusukela akuwona wonke esifundeni ebusika efudumele ezinjalo.
Njengoba ubona, siye sathola ukuthi isitsha best for umphefumulo senziwa udini ukujikeleza (ie besshvovye design). ithangi ezinjalo kahle ukumelana lokushisa ekushintshashintsheni ezinkulu futhi heats amanzi ngokushesha. Nale umthamo nje Awunawo izinkinga phakathi ukusebenza.
Yuriy Pavlovich Kazakov, "epholile ekuseni." isifinyezo
Uhlu izinto eholidini olwandle. Yini ukuthatha nawe uma uvakasha?